Ko Google ichapa mari here Rust dudziro yeLinux kernel? | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Linux kernel yakanyorwa muC uye zvimwe zvikamu muASM. Imwe nguva yapfuura chirongwa chakatorwa kunyorazve zvikamu zvekare zveASM muC pamwe chete, kuti zvive nyore kune vanogadzira kuti vanzwisise nekuvandudza. Iye zvino vari kutaura nezve imwe nhanho, sezvazviri uchishandisa Rust mune tsanga yekuchengetedza cuestion.
Icho chinhu chakakwikwidzwa mukati mukati memunharaunda nekunze. Pasina kuenda kumberi, gore rapfuura, Linus Torvalds Akavimbisa kuti aizoona kutsiviwa kweC nemumwe mutauro wepurogiramu mune ramangwana: «Zvinogona kana kunge zvisiri mumaoko eRust«. Uye gore rino, Google yakazivisa kuti ichabhadhara chikamu cheiyi purojekiti, ichibhadhara iyo yakazara-nguva programmer kuti anyore zvekare chikamu.
Waunoshandira ndiye achave Internet Security Boka. Iyo programmer iri kubvunzwa ichave Spanish, Miguel Ojeda, uyo aitova nechekuita pakuronga software yeGreat Hadron Collider kuCERN.
Kunyangwe zviri musimboti iri chete nezve zvimwe zvakaomarara zvikamu zvinozopihwa Rust nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza, senge zvimwe vatongi uye ma module zvakafanana, mune ramangwana inoitirwa kuve izere. Nenzira iyi, iyo kernel inozopedzisira yabatsirwa kubva kune zvakanakira iyi yakavhurwa sosi programming mutauro wakagadzirwa neMozilla.
Uku kuvhiya kuri zvinodhura chaizvo, uye inosanganisira njodzi dzayo, asi zvirokwazvo kune makambani akati wandei anofarira mari yeiyi chirongwa. Ikozvino yave Google, asi zvimwe zvinogona kujoina. Nekudaro, zvinofanirwa kujekeswa kuti shanduko dzinoitwa neyekuvandudza weSpanish hadzivimbisa kuitisa kwavo mune yepamutemo vhezheni yeLinux kernel panguva ino. Ivo vanofanirwa kuwana kuenda-kumberi kubva kune kernel admin timu uye Torvalds kusarudza kana kusunungura iyi kodhi neRust inosanganisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Ko Google ichapa mari here Rust dudziro yeLinux kernel?
GTA III, Vice Guta, uye San Andreas vanokanganiswa ne ... DMCA